ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှငိ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ နာယက ဦးသိန်းစိန်းအား ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှငိ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ နာယက ဦးသိန်းစိန်းအား ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှငိ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီနာယက ဦးသိန်းစိန်းအား ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဌ HE. Mr. Hideo Watanabae ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲက ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၂)ရက် နံနက် ၀၉း၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဌာနချုပ် ဧည့်ခန်းမ (၁) တွင် လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင်ဂျပန်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအသင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမူ့တိုးမြှင့်ရေး၊နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီနာယက ဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးသက်နိုင်ဝင်း ၊ ဗဟိုအတွငိးရေးမှူး ဦးပိုက်ထွေး ဗဟိုအလုပ်မူ့ဆောင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် နှင့် ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းတို့ တက်ရောက်ပြီး ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဌ H.E. Mr. Hideo Watanabae နှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦး တက်ရောက်ကြောင်းသတင်းရှိပါသည်။
အခွန်ဌာန ရုံးခွဲများ၌ ထီလက်လီရောင်းချမည့် အစီအစဉ် ရပ်ဆိုင်းမည် →
October 18, 2018 USDP 2016 Comments Off on ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေး ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင် မြို့နယ် ရပ်ကျေးအဆင့် ပါတီတာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံ
မိုးကောင်းပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ (၄၁)ကြိမ်မြောက် သံဃာ့ဒါန ဆွမ်းဆန်တော် လောင်းလှူ
September 4, 2017 USDP 2016 Comments Off on မိုးကောင်းပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ (၄၁)ကြိမ်မြောက် သံဃာ့ဒါန ဆွမ်းဆန်တော် လောင်းလှူ